Owashadiswa ngenkani 'ubulale' abasemzini ngoshevu | News24
Owashadiswa ngenkani 'ubulale' abasemzini ngoshevu
Multa - Owesifazane wasePakistan onike umyeni wakhe ubisi olunoshevu uholele ekufeni kwamalungu angu-12 asemzini kulandela ukuthi kusebenzise lolu bisi ukwenza isiphuzo, kusho amaphoyisa.
Lo wesifazane, owashadiswa ngenkani ngoSepthemba, ukhalelwe ngamasongo kaSigonyela wabe esebekwa icala lokubulala ekanye neshende lakhe, kusho isikhulu samaphoyisa u-Owais Ahmad, etshela izintatheli esifundeni iMuzaffargarh ngoMsombuluko.
Amaphoyisa asola ukuthi u-Asiya Bibi wathaka ubisi lomyeni wakhe ngoshevu ngesonto eledlule kepha umyeni wangaluphuza njengoba kwakuhleliwe, esikhundleni salokhu lathathwa kwenziwa ngalo isiphuzo esabe sesinikezwa umndeni kamufi.
OLUNYE UDABA: Ugcwele amathafa owesifazane 'owadlisa umyeni ushevu' esekhathele ucansi
Isibalo sabashonile simi ku-13, okubalwa nomyeni wakhe, kanti abanye abangu-14 bangeniswe esibhedlela, kusho u-Ahmad.
"Amaphoyisa asembophile u-Asiya Bibi, owesilisa no-anti wakhe ngokuba yingxenye yalesi sigameko base bebekwa icala lokubulala," kushuqa u-Ahmad.
Uthe lo wesilisa oboshiwe kusolakala ukuthi uyishende likaBibi, kanti u-anti nguye owasiza ekwakhiweni kozungu lokubulala.
Ukushadiswa ngenkani kanjalo nokuganiswa kwezingane zisezincane kuvamile ePakistan, ikakhulukazi ezindaweni ezisemakhaya kanye nalezo ezihlala abantu abadla imbuya ngothi, lapho abesifazane bengenawo amalungelo.